🥇 ▷ Spotify for Android ayaa lumisa qalabkeeda, laakiin waad ku soo celin kartaa barnaamijkan ✅
Spotify for Android ayaa lumisa qalabkeeda, laakiin waad ku soo celin kartaa barnaamijkan
Haddii aad cusboonaysiiso Spotify noockeedii ugu dambeeyay ee Android oo aad isticmaashay widget, waxaad la kulmi doontaa wax lala yaabo oo aan fiicneyn: Widaysku mar dambe ma shaqeeyo. Intaa waxaa sii dheer, aaladda loo yaqaan ‘Spotify widget’ majirto sidaas oo kale.
Xalka ku meel gaarka ah waa in la rakibo nooc ka mid ah Spotify, laakiin ahaanshaha adeeg qulqulka qadka tooska ah, waqti dhow ama goor dambe nooca cusub ayaa joojin doona shaqada. Xalka ugu fiican ayaa ah u adeegso barnaamij saddexaad dhinac si aad u abuurto widget la mid ah, waxaanan helnay mid si wanaagsan kuu shaqeeya.
Boqorka dhintay, boqoro
Nooca 8.5.18.932 ee loo yaqaan ‘Spotify’ kuma jiro heerkiisa widget-ka, in kasta oo shirkaddu aysan weli ku dhawaaqin inay ka jawaabayaan isticmaaleyaasha seegay, waxaan horay u soo marnay tan ka hor: Markaa astaamaha uu baaba’o, waa wax aan caadi aheyn haddii ay soo noqoto, guud ahaan waxay la micno tahay in horumarayaasheedu ay siiyeen hawsha.
Maqnaanshaha widget rasmi ah, wanaagsani waa mid aan rasmi ahayn. Waxaa jira dhowr barnaamijyo Google Play ah oo u adeega sidii aalad aalad si loo xakameeyo muusikada, in kastoo dhammaantoodna si fiican ugama dhexmaraan Spotify gaar ahaan ama noocyadii ugu dambeeyay ee Android guud ahaan. Midda aan caddeynay inay shaqeyso waa Ubiquity Music Widget.
Uidquity Music Widget
Soo saare: jathak
Qeybta: Muusig iyo maqal
Kahor intaadan bilaabin rakibida iyo isku-habeynta aaladda aad ku shaqayso, maskaxda ku hay inaad u baahan tahay wax yar qaabeynta hore. Kahor inta aysan shaqeynin, ka fur fur app ka bilowga barnaamijka oo riix Fur furitaanka ogeysiinta. Waa inaad siisaa app rukhsad si uu u aqriyo ogeysiisyada, maadaama ay tahay habka ay u adeegsato si loo ogaado heesta ciyaareysa.
Farsamo ahaan uma baahnid inaad wax kale abaabusho, laakiin haddii aad rabto waad ku dhex lugeyn kartaa xulashooyinka, halkaasoo suurtagal kuu ah inaad wax badan ka beddel muuqaalka muuqaalka, oo ay kujirto qaabkeeda iyo cabirka inta ugu badan waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Inta soo hartay, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku darto widget shaashadda guriga, sida had iyo jeer. Ma waxaa lagu heli karaa laba cabbir: 4 x 1, oo la mid ah tii widget-ka Spotify-kii hore, iyo 2 x 2, labajibbaarane. Aaladda loo yaqaan ‘4 x 1’ widget ‘waxay leedahay qaab caadi ah oo la mid ah kan loo yaqaan’ Spotify ‘asalka ah, in kasta oo ay xoogaa nadiif ah.
Haddii aad rabto inaad isbarbardhigto si faahfaahsan, halkan waa a labada dhinac dhinac. Xagga sare waxaa ka muuqda widget-ka Spotify-kii hore oo hoosta ku yaal waa widget-ka oo leh muuqaalka caadiga ah ee Ubiquity Music Player. Iyagu aasaas ahaan waa isku mid.
Widayskii hore (xagga sare) iyo Ubiquity widget (hoosta)
Maskaxda ku hay in bilowga laga yaabo inay ku kacdo waxoogaa kharash ah si loogula shaqeeyo muusikada. Sida ugufiican ee looga shaqeyn karo waa ku bilaw dib u soo kabashada barnaamijka Spotify oo aan ka imaanin widget-ka. Laga bilaabo markaa, sifiican buu u shaqeeyaa.
Sawirka | FreePik
Wadaag Spotify for Android ayaa lumisa widget, laakiin waad ku soo celin kartaa barnaamijkan